Duckula Count | ဖုန်းခရက်ဒစ် slot များကပေးဆောင် | ကာစီနိုဗြိတိန်အွန်လိုင်းကာစီနို
Duckula အဆိုပါတစ်ခုဖြစ်သည် ဖုန်းခရက်ဒစ် slot များကပေးဆောင် Vampire နှင့် ghouls အကြောင်းကို. ဒီအွန်လိုင်း slot က 1980 နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင်ထံမှအလားတူခေါင်းစဉ်၏ပေါ်ပြူလာကာတွန်းအပေါ်အခြေခံသည်. အသေးစိတ်အစီအစဉ်ပြောင်းရွှေ့အပေါ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြောင်းကစားသမားများအတွက်မိုဘိုင်း slot ကဗားရှင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ပိုမိုသိဖို့အောက်ကပြန်လည်သုံးသပ် Read.
ဖုန်းခရက်ဒစ် slot အားဖြင့်ဒီ Pay ကို၏ Convenience
ဤသည်မိုဘိုင်း slot ကအဆင်ပြေအချို့ကိုဒီဂရီနှင့်အတူအွန်လိုင်းလောင်းကစားသမားတွေပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. သငျသညျရရှိနိုင်မဆိုမိုဘိုင်း device မှကစားနိုင်ပါတယ်. iOS နှင့် Android OS ကိုနှင့်အတူကစားသမားဒီကစားနိုင်ပါတယ် ဖုန်းခရက်ဒစ် slot များကပေးဆောင်.
သိုက်သာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုခရက်ဒစ်သုံးပြီးလုပ်နေကြတယ်. သို့သျောလညျး, သင်ဤနည်းလမ်းများမှတဆင့်ထုတ်ယူလို့မရပါဘူး. ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအမြန်သိုက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ငွေသားပေးချေမှုများကိုအောင်သို့မဟုတ်သင့်အကြွေးဝယ် / ငွေကြိုကဒ်များကို အသုံးပြု. အဘို့လိုအပ်ဘယ်သူမျှမက.
ဒီမိုဘိုင်း Duckula ပေါက်နားလည်ခြင်း
ဤသည် slot ကရှိပါတယ် 40 fixed paylines,5reels နှင့်3အတန်း. သင်ကာတွန်းနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ပြီးနောက်သင်ကျိန်းသေသည့်နောက်ခံမြင်ကွင်းအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကွာနေတဲ့ကြောက်စရာသင်္ချိုင်းကနေတချို့အကွာအဝေးမှာသော decrepit ရဲတိုက်ပြီ. အဆိုပါ reels အဆိုပါသင်္ချိုင်းထဲတွင်မြက်ပင်ပေါ်မှာကျိန်းဝပ်သောအသင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်သတ်မှတ်ကြသည်.
သငျသညျတခုပုံမှန်ကတ်များသင်္ကေတအရ, J ကို, K သည်, မေး,9နှင့် 10 ဤသည်၌ ဖုန်းခရက်ဒစ် slot များကပေးဆောင်. သည်အခြားသင်္ကေတဟာ decrepit ရဲတိုက်တို့ပါဝင်သည်, လက်နက်၏ကုတ်အင်္ကျီ, လင်းနို့တစ်ကောင်, နာရီနှင့်ကြီးမားသောကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို.
ဖုန်းခရက်ဒစ် slot အားဖြင့်ဒီ Pay ကိုခုနှစ်တွင်အပိုဆုအင်္ဂါရပ်များ
သင်ကဒီ slot ကတစ်ဦးရိုင်းနှင့်အပိုဆုသင်္ကေတရှိသည်သောသိသင့်. သင်တစ်ဦးကာတွန်းရှိနေစဉ်ရိုင်းနှလုံးသား icon ကိုတစ်ဦးလောင်းကြေးဖြစ်ပါသည် ဆုကြေးငွေသင်္ကေတ. ဒီ slot ကအတွက် In-ဂိမ်းဆုကြေးငွေကျည်ကာတွန်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များက activated နေကြတယ်. သူတို့ကသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဘဲပါဝင်သည်, မိမိအ manservant က Igor အမည်ရှိနှင့်သူ၏ထိန်းတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့အမည်ရှိ. သင်ဤအွန်လိုင်း slot က play အဖြစ်ကဤဇာတ်ကောင်ဟာ reels ဘေးမှာပေါ်လာသည့်အခါအဆိုပါဆုကြေးငွေ features တွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်.
တစ်ဦးက Vampire ဘဲရိုင်း: အဆိုပါ reels ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးရိုင်းအဖြစ် Vampire Duck လုပ်ရပ်များ.
တစ်ဦးက Igor နက်နဲသောအရာသင်္ကေတလှည့်လည်: ဒီနေရာတွင်က Igor ကိုက်ညီသင်္ကေတမှကိုပြောင်းလဲသော reels အပေါ်မှော်ဆေး icon တွေကိုနေရာ.
တစ်ဦးကတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ 3×3 ဧရာရိုင်းဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်: တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့တစ်ချိန်တည်းမှာသုံးတန်းနှင့်သုံး reels အပေါ်လွင်ပြင်နေရာ.
ဖုန်းကရက်ဒစ်ပေးချေမှုဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အထိုင်၌ကြီးစွာသောအရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသိုက်စေရန်တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုလုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, ဒီ slot ကအနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာနှင့်တကွကြွလာ 93.35% RTP.
ရဲတိုက် Builder II ကို